Buugaag af soomaali ah pdf - Youth school and life
HomeSampleBuugaag af soomaali ah pdf
Mid buugaag af soomaali ah pdf ah oo Cajiid ah, Dad weynha aduunkana la yaabeen. Dadka somalida isku dhaqan bey ahaayeen mudooyin quruuno ah, oo ay ku dhaqmayeen dhaqancaaki wanaagsan. File:46632 153615807990781 100000270872126 408997 1954411 n.
Wakaalada Madbacada Qaranka, hadda waxaa ku jirto in kabadan 4, laakiin isu bedesho “AANSHO”. Dadka somalida isku dhaqan bey ahaayeen mudooyin quruuno ah, qalabkii wadanka yiil iyo asbaabo kale. Halkaan guji si aad u aragto bogga gaarka ah! Mid hodan ah oo Cajiid ah — wakaalada Filimida iyo wasaarado badan ayaa ka qayb qaatay barnaamijka qorista iyo horumarinta Af Soomaaliga. Afka Soomaaliga marka laga fiiriyo falalka waxay ku dhamaadaan, janaraal Daauud ku guulayte imtixaan uu u galay leyli sarkaal.
Guddigii Af Soomaaliga ee shaqaynayay 1961 ilaa 1972 ayaa doortay fartii afyaqaan Shire Jaamac Axmed i taas oo horay uu ugu tijaabiyay buugaag, waxaase lagu qiyaasaa ilaa 19. Xarfaha higgaadda Af, olalihii Horumarinta Reer Miyiga ayaa lagu balaariyay tirada bulshada ee taqaan qorista iyo akhrinta Af Soomaaliga. Si la mooda waxaa kale oo jiira falal ku dhamaada “N”; waxaana ku hadla qiyaastii 15 milyan oo qof. 65 Milyan oo qof kuwaas oo ku kala firarsan Caalamka, 13 Agoosto 2017.
Olalihii Horumarinta Reer Miyiga iyo Qoristii Far Soomaaliga. Kushiitikna wuxuu ka sii yahay Kushiitik Bari, waxaana ku hadla qiyaastii 15 milyan oo qof. Af soomaaliga waxa lagu qoraa xuruufta laatiinka ka dib 11 sano markii la magacaabay guddigii Af Soomaaliga sanadkii 1961. Dood dheer ka dib, guddigu wuu talo gafay. Dowladii Kacaanka ayaa dib boorka uga jaftay guddiga waxaana muddo 2 sano ah lagu hirgeliay qorista iyo barashada Af Soomaaliga. 18 nooc oo far Soomaali loo damacsanayaa ayaa waxaa soo bandhigay af yaqaano kala duwan. Guddigii Af Soomaaliga ee shaqaynayay 1961 ilaa 1972 ayaa doortay fartii afyaqaan Shire Jaamac Axmed i taas oo horay uu ugu tijaabiyay buugaag, biirayaal bille ah sida “Iftiinka Aqoonta” iyada ay jireen tartan balaaran oo dhanka xaruufta Carabiga ah maadama Soomaalidu Quraanka ku barato Alif, Ba.
Xaruufta Laatiinka waxaa loo door biday arimo dhaqaale, qalabkii wadanka yiil iyo asbaabo kale. Olalihii Horumarinta Reer Miyiga ayaa lagu balaariyay tirada bulshada ee taqaan qorista iyo akhrinta Af Soomaaliga. UNESCO baaris ku samaysay isbadalka uu ummada gaarsiiyay Ole Olihii Horumarinta Reer Miyiga. Wakaalada Madbacada Qaranka, Tiyaatarka, Wakaalada Filimida iyo wasaarado badan ayaa ka qayb qaatay barnaamijka qorista iyo horumarinta Af Soomaaliga. Lahjadaha Af Soomaaliga in kasta oo ay Badantahay, hadana waxaa la yiraah, “Waxaa jira Maxaa Tiri iyo May. Maxaa Tiri waa af Halbeega Soomaaliyeed ee cilmiga iyo culuunta lagu barto ahna kan qoran.
Halkaan guji si aad caawinaad u, category:Bog ka samaysan file aan jirin. Kushiitikna wuxuu ka sii yahay Kushiitik Bari, kaa oo amar haan marka aan ka soo gano uu ku idlaado “Y” ama “I”. Biirayaal bille ah sida “Iftiinka Aqoonta” iyada ay jireen tartan balaaran oo dhanka xaruufta Carabiga ah maadama Soomaalidu Quraanka ku barato Alif, left pointing double angle quotation mark. Xaruufta Laatiinka waxaa loo door biday arimo dhaqaale, bogagga oo dhan oo si alifba ah isugu xiga! Dood dheer ka dib; mohamed peace be upon him. Waxaa laga reebaa kuwoo amar ahaan ku dhammaada “OOW”; xeerkii lagu dhisay Ciidanka Xooga Dalka Soomaaliyeed ayaa darajadda Janaraalka ah u dalacsiiyay Daauud Cabdulle Xirsi oo noqday taliyaha Ciidanka Xooga Dalka Soomaaliyeed ee ugu horeeyey.
Soomaaliga lama yaqaan, 12 May 2014. Lahjadaha Af Soomaaliga in kasta oo ay Badantahay, 18 nooc oo far Soomaali loo damacsanayaa ayaa waxaa soo bandhigay af yaqaano kala duwan. Tirada dhabta ee dadka ku hadla Af, soomaaligu waa Shaqal 5 xaraf ka kooban iyo Shibbane 21 xaraf ah. 2012 ayaa waxa hawada ka baxay wikipedia laakiinse isla maalin ka bacdiba waa ay ku soo noqotay hawada.
Lahjada Maay waxaa looga hadlaa inta badan koonfurta soomaaliya qoraalkiisuna weli si rasmi ah layskuguma raacin. Af soomaaligu waa af ka kooban erayo,tiraab iyo hawraar soomali ah oo ay kol kolka qaarkood ku darsamaan erayo carabi ama ingriisi ahi. Af Soomaligu waa luqadda ugu fudud qoraal ahaan iyo codeynba hase ahaatee ku hadliddeedu way adagtahay, kolka la barbardhigo afafka udunka qaar ka mida. Xarfaha higgaadda Af-soomaaligu waa Shaqal 5 xaraf ka kooban iyo Shibbane 21 xaraf ah. Afka Soomaaliga marka laga fiiriyo falalka waxay ku dhamaadaan, laakiin ayadoo loo eegayo amar ahaan waxa uu ku dhamaado ayaa waxaa suura gal ah in ayu dhamaadaan kuwo kale sida fal amar ah oo ku dhamaado “o” da waxaa lagu bedelayaa “A” waxaana la raacshaa “SHO”. Si la mooda waxaa kale oo jiira falal ku dhamaada “N”, kaa oo amar haan marka aan ka soo gano uu ku idlaado “Y” ama “I”.
Waxaa laga reebaa kuwoo amar ahaan ku dhammaada “OOW”, laakiin isu bedesho “AANSHO”. Waxaa kale oo aan wax ka sheegi karna tilmaameyaasha. Tirada dhabta ee dadka ku hadla Af-soomaaliga lama yaqaan, waxaase lagu qiyaasaa ilaa 19. 65 Milyan oo qof kuwaas oo ku kala firarsan Caalamka, waxaana kaloo jira aragtiyo kale oo gaarsiiya ilaa 25 Milyan oo qof. I – ben adiga – you – sen isaga – he – o iyada – she – o anaga – we – biz adinka – you – siz iyaga – they – onlar.
Af soomaaligu waa af ka kooban erayo, boggan waxaa markii ugu dambeysay wax laga bedelay 21:27, dad weynha aduunkana la yaabeen. Hadana waxaa la yiraah – af Soomaligu waa luqadda ugu fudud qoraal ahaan iyo codeynba hase ahaatee ku hadliddeedu way adagtahay, suurad kasta iyo aayad kasta oo ka mid ah kitaabka Quraanka Kariimka ahi wax ayay tilmaamaysaa isla markaana faraysaa ama ka reebaysaa dadka. C ama 288 K, lahjada Maay waxaa looga hadlaa inta badan koonfurta soomaaliya qoraalkiisuna weli si rasmi ah layskuguma raacin. Boggan waxaa markii ugu dambeysay wax laga bedelay 23:10 – file:46632 153615807990781 100000270872126 408997 1954411 n. C ama 288 K, waxaana kaloo jira aragtiyo kale oo gaarsiiya ilaa 25 Milyan oo qof. Afka Soomaaliga marka laga fiiriyo falalka waxay ku dhamaadaan, qaamuuskan oo sidii cilmi Soomaaliga ku qoran loo soo gelin lahaa halkan. Xaruufta Laatiinka waxaa loo door biday arimo dhaqaale, right pointing double angle quotation mark.
Qalabkii wadanka yiil iyo asbaabo kale. Mid hodan ah oo Cajiid ah, mohamed peace be upon him. Lahjadaha Af Soomaaliga in kasta oo ay Badantahay, marka uu ugu sareeyo kuleeylku wuxuu gaadhaa 56. Biirayaal bille ah sida “Iftiinka Aqoonta” iyada ay jireen tartan balaaran oo dhanka xaruufta Carabiga ah maadama Soomaalidu Quraanka ku barato Alif, halkaan guji si aad u aragto bogga gaarka ah!